ONG TAHEZA : Miantso ireo malala-tanana hanampy amin’ny famatsiana fitaovam-pianaran’ireo ankizy sahirana. · déliremadagascar
Manao antso avo amin’ireo malala-tanana afaka manome izay azon’izy ireo atao ny ONG mba ahafahana manampy ireo ankizy ireo hiatrika ny taom-pianarana 2021-2022. Raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana dia maro amin’ireo mpianatra no mbola tsy ampy ny fitaovam-pianarana. Ho fanamaivanana ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny sy hamporisihana ireo ankizy hianatra no mahatonga ny ONG TAHEZA mikarakara izao hetsika izao. Raha misy terem-panahy hanome dia afaka miantso ny laharana 034 12 410 95 na 032 80 506 51 na ihany koa mandefa mailaka amin’ny ity adiresy ity: ongtaheza@gmail.com. Afaka atao ihany koa ny miresaka mivantana amin’ny pejy facebook ONG TAHEZA.